I-Wizkid ijika ibe ngamashumi amathathu ama-Fani Bhiyozela-Iindaba eNigeria kunye namabali eGlobal
I-Rave News Digest: I-Wizkid ijika i-30, ii-akhawunti eziqinisekisiweyo ze-Twitter zabantu abadumileyo kunye nabapolitiki batyholwe kwi-Crystal Scam, eLa Liga nakwezinye izinto ezingakumbi
I-Rave News Digest: U-Tory Lanez Ngokudibeneyo Shot Megan Thee Stallion, Amalungelo oLuntu amaVeteran Agqitha ku, Martinelli + Ngakumbi
IUmculi weAfrobeats ongumcuphi uWizkid uguqula iminyaka engama-30, iiakhawunti eziqinisekisiweyo ze-Twitter eziqhekezwe kwisikali se-crypto, umphathiswa wezempilo eSpain uthandabuza abalandeli bangabuya enkundleni. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UWizkid ubhiyozela iminyaka engama-30 yokuzalwa
U-Ibrahim Ayodeji 'Wizkid' Balogun
Inkwenkwezi yeAfriatati yaseNigeria, Ayodeji Ibrahim Balogun, kwaziwa njenge Wizkid, ijika i-30 namhlanje, kwaye abalandeli baphendukele kwimidiya yoluntu ukubonisa uthando lwabo kunye nenkxaso kwi-megastar. Le mvumi njengangoku ithambeka njengenombolo 1 eNigerian naseGhana kwi-twitter ene-hashtag # WizkidAt30.
UWizkid ojika emva kweminyaka engama-30 namhlanje, wabhengeza ngokucacileyo umhla wokukhutshwa kwe-albhamu yakhe elandelayo 'Yenziwe kwiLagos'kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Nangona abalandeli babengaqinisekanga malunga nokuba bathembele kwisibhengezo, uWizkid wabaqinisekisa ngokubakhulula ngengoma entsha ukumakisha umhla wakhe wokuzalwa wama-30 namhlanje. Ingoma enesihloko esithi 'uncumo'Ndinemvumi yaseMelika yeRnB I-HER iyafumaneka ukuya kuwo onke amaqonga.
Isatifikethi sokuzalwa asiyo fomu yokuchongwa - iNkundla ePhakamileyo yaseGhana
Inkundla ePhakamileyo yaseGhana ibambe ngazwi linye ukuba isatifikethi sokuzalwa akuyona indlela yokuchonga. Inkundla ichaza ukuba olu xwebhu aluqulathi “ukuba ngubani na ophetheyo.
Oku kuqulethwe kwisigwebo senkundla kwityala elamiswa ngummi wabucala UMark Takyi Banson inkundla yamisa isigwebo nge-25 kaJuni kunye netyala elamiswa yi-NDC.
Ngelixa ityala le-NDC lalifuna ukuba kusetyenziswe ikhadi lesazisi labavoti kwisithuba sobhaliso, uMnu Banson wenza ityala lokufakwa kwesatifikethi sokuzalwa esithi unyanzelisa ukuba bangabavoti njengabantu baseGhana abaneminyaka eli-18 ubudala.
3. URobert McBride uqeshiwe kwi-Arhente yoKhuseleko lweLizwe
Intloko yangaphambili yeCandelo loPhando lwaMapolisa elizimeleyo (i-IPID) URobert McBride uqeshiwe njengomlawuli weCandelo leZangaphandle leArhente yoKhuseleko lukaRhulumente. Ukuqeshwa kukaMcBride kwamkelwa nguMongameli UCyril Ramaphosa.
Kwingxelo ngoLwesine, nge-16 kaJulayi ngo-2020, iSebe Lezokhuseleko laseburhulumenteni lathi uMcBride wonyulelwe iminyaka emithathu eqala nge-1 kaJulayi, 2020, ukuya kuJuni 30, 2023. Ayanda Dlodlo uthi ukuqeshwa kukaMcBride kuzosebenza ukuzisa uzinzo kwezombutho kwi-Arhente yoKhuseleko lweLizwe.
4. I-Apple, i-Obama, iMusk kunye nezinye ii-akhawunti ze-Twitter eziqinisekisiweyo ezitshixiwe kwi-crypto scam
Inani leakhawunti ze-Twitter eziphezulu kwaye zaqanjwa ngo-Lwesithathu ngabahlaseli abasebenzisa iiakhawunti - abanye bezigidi zabalandeli-ukusasaza ubutyala be-cryptocurrency.
iapile, Elon Musk, kwaye UJoe Biden ziphakathi kweeakhawunti ezazijongelwe phantsi kugcino oluphangaleleyo olwajongwa ngokuhlala luchithe iiyure eziyimfihlo emva kokuba kwenzeke. Ezo akhawunti kunye nabanye abaninzi bathumela umyalezo okhuthaza idilesi yesipaji ye-bitcoin ngesimangalo sokuba isixa sayo nayiphi na intlawulo eyenziwe kwidilesi iya kuphindwa kabini kwaye sithunyelwe kwakhona - indlela eyaziwayo yomkhwa we-cryptocurrency.
Kwiiyure ezilandelayo emva kohambo lokugqibela, Kim Kardashian West, UJeff Bezos, uBill Gates, UBarack Obama, Wiz Khalifa, uWarren Buffett, YouTuber MnuBeast, Wendy's, Uber, CashApp kwaye UMike Bloomberg ithumele nesikhalazo se-cryptocurrency. I-akhawunti yenkxaso ye-Twitter ibike ukuba i-hacker yafumana isixhobo esingaphakathi se-Twitter kulawulo ukufikelela kwiiakhawunti eziphakamileyo.
5. Umphathiswa wezempilo eSpain uthandabuza ukubuya kwabalandeli eLa Liga ngoSeptemba
I-La Liga ibuyele kwisenzo emva kweengcango ezivaliweyo ngoJuni 11 kwaye i-Real Madrid ingaphezulu kwesahlulo
Umphathiswa wezempilo eSpain uthi akacingi ukuba abalandeli bazokwazi ukubuyela kwimidlalo yeBhola kweli lizwe xa kuqala isizini entsha ngoSeptemba. Isebe likarhulumente lezemidlalo kunye neLa Liga lalinethemba lokuba abalandeli bazakubuya behlisiwe. Kodwa isoyikiso sokunyuka kosuleleko lwe-coronavirus sibekwe ukuthintela intshukumo.
"Ukunyaniseka, andiyiboni, ngenxa yokwenyani esiyiyo," Umphathiswa wezempilo Santiago Illa uxelele isikhululo sikanomathotholo uCadena Ser.
"Sibone amaqela athile osulelo, kwaye nangona sikwazile ukuzilawula, andibaboni [abalandeli bebuya]."
Uhlobo Rave Julayi 16, 2020
UNaya Rivera Kubikwa ukuba Wafa Emva Kokusindisa Unyana Wakhe: Iimbambano + nangakumbi